Ciidamada Jubbaland oo gacanta ku dhigay niman watay walxaha qarxa (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidamada Jubbaland oo gacanta ku dhigay niman watay walxaha qarxa (SAWIRO)
Wararka naga soo gaaraya degmada Dhoobley ee gobolka J/hoose ayaa sheegaya in ciidamada maamulka Jubbaland ay gacanta ku dhigeen seddax nin oo la sheegay inay wateen miinada nooca dhulka lagu aaso ah.
Seddaxdaasi nin ayaa la sheegayaa in la qabtay xilli ay ciidamada maamulka Jubbaland howlgalo culus ka sameeyeen degmada Dhoobley, waxayna nimaankaasi yihiin farsamayaqaanada Al-shabaab ee waxyaabaha qarxa.
Saraakiil ka tirsan ciidamada nabad-sugidda ee maamulka Jubbaland oo goordhaw la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay in raggaasi la qabtay uu qorshahoodu ahaa inay miinooyin ku aasaan saldhiga ciidanka booliska ee ku yaalla degmada Dhoobleey, balse lagu guuleystay in laga hortago.
Sidoo kale, saraakiishaasi ayaa inoo sheegay in raggaasi lasoo qabtay dhawaan maxkamad lasoo taagi doonno, islamarkaana lagu qaadi doonno xukunka u degsan maamulka Jubbland.
Dhinaca kale, seddaxda nin ee la qabtay ayaa la sheegayaa in labo ka mid ah ay goobo ganacsi ku leeyihiin degmada Dhoobleey, basle ay si hoose ula shaqeynayeen Al-shabaab.
Ugu dambeyn saraakiisha ciidamada nabad-sugidda ee maamulka Jubbaland ayaa ugu baaqay shacabka reer Jubbland inay la shaqeeyaan laamaha amniga, islamarkaana ay soo sheegaan qofkii ay ka shakiyaan.
Illaa iyo haatan ma jiro wax jawaab ah oo kasoo baxay dhinaca Al-shabaab, kaas oo ay kaga hadlayaan seddaxdaasi nin oo iyaga ka tirsan islamarkaana laga qabtay degmada Dhoobley ee gobolka J/hoose.